सुनभन्दा दोब्बर महँगो 'ह्वाइट गोल्ड' कसरी भयो आधा सस्तो ? पढ्नुहोस - Rapti Khabar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सुनभन्दा दोब्बर महँगो ‘ह्वाइट गोल्ड’ कसरी भयो आधा सस्तो ? पढ्नुहोस
कात्तिक २२, काठमाडौं । एकदशक अघिको कुरा हो, ‘ह्वाइट गोल्ड’ अर्थात् सेतो सुन भनेर चिनिने ‘प्लाटिनम’ निकै महँगो धातुमा पर्थ्यो। सुनभन्दा दोब्बर मूल्य पर्ने प्लाटिनम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लोकप्रिय थियो।
यो खबर रोशन सिग्देलले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । सन् २००८ को फेब्रुअरी १८ को तथ्यांकले प्लाटिनमको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २१६७.८० अमेरिकी डलर प्रतिऔंस देखाउँछ। सोही दिन सुनको मूल्य त्यसको आधाभन्दा पनि कम थियो। अर्थात् प्रतिऔंस ९०८ अमेरिकी डलरमा कारोबार भएको थियो। सन् १९९९ मा प्लाटिनमको मूल्य कम प्रतिऔंस ३५० अमेरिकी डलर थियो। त्यसपछि यो निरन्तर बढेको हो।
‘त्यस बीचमा अमेरिका तथा युरोपमा विशेषगरी प्लाटिनमका गहना लगाउने चलन बढ्यो, माग र मूल्य पनि बढ्यो,’ महर्जनले भने। तर सुनभन्दा दोब्बर महँगो प्लाटिनमले आफ्नो विरासत कायम गर्न सकेन।
यसमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको ठूलो भूमिका छ। प्लाटिनमको मूल्य उच्च भएकै बेला विश्वभर आर्थिक मन्दी सुरू भयो। अमेरिकाबाट सुरू भएको मानिने त्यो मन्दीका कारण प्लाटिनमको मूल्य पनि घट्यो। संसारभर सुन सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग भइरहँदा प्लाटिनम ‘फेसनएबल’ गहना मात्र मानियो। यसले सम्पत्तिको दर्जा पाएन। त्यसैले मान्छेले प्लाटिनममा लगानी नगरेको देखिन्छ।
‘विशेषगरी हिराका गहनामा यसको प्रयोग गरिन्छ। कसैले माग गरे मात्रै विदेशबाट मगाइदिने हो। नभए सुनचाँदी जस्तो यसको कारोबार हुँदैन,’ बज्राचार्यले भने।
‘प्लाटिनमका गहना बनाउन धेरै तातो चाहिन्छ। मेसिनबाट बनाउँदा मूल्य पनि बढी पर्ने हुनाले नेपालमा यसको कारोबार र प्रयोग कम छ,’ महर्जनले भने। चाहनेले विदेशबाट मगाउन सकिन्छ।